आज पुराना गुडिया "दानव उच्च" 12 वर्ष मुनिका बालिका बीच को लोकप्रियता, बस रोल। कार्टून, तथ्याङ्कले, रंग पुस्तकहरू, पर्चा, स्टेशनरी वस्तुहरू र लोगो र चित्रहरु संग वस्त्र को एक किसिम र पाठ्यक्रम, गुडिया आफूलाई मात्र egged विश्वव्यापी प्रेम। स्वाभाविक, Kindergartens र विद्यालयमा नयाँ वर्ष मेला को पूर्वसन्ध्या मा, यो वेशभूषा गर्न आउँछ जब बालिका बस snowflakes, पुतलीहरु, पटाखे, खरायो र Foxes को पुरानो पुस्ता गर्न परिचित मा तैयार गर्न इन्कार गर्छन्। र मामिलामा यो राज्य एकदम तार्किक छ!
मनपर्ने बच्चा अस्वीकार गर्न चाहे, त्यो आफ्नै पोशाक आफ्नो हातमा "दानव उच्च" बनाउन थप सजिलो हुने छैन? तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ भने आजको छोराछोरीको वर्ण बस जस्तो। अन्त मा, हामी तिनीहरूलाई बच्चाहरु आफूलाई वयस्क सिकाउनुभयो!
त्यसैले, यो "दानव उच्च" tinkering र वेशभूषा यस लेखमा छलफल गरिनेछ कसरी छ। कुनै जटिल गणना वा कुनै पनि परिष्कृत ढाँचाको हुनेछ। तल प्रस्तुत निर्माण को एक भेद एकदम सरल र सीधा छ र बुनाइ कि उपयुक्त एक सय प्रतिशत भरोसा गर्नेहरूलाई पनि छ - यो बलियो बिन्दु छैन!
एक कदम: मोडेल चयन
हामी वयस्क मात्र बालिका प्रत्येक वर्ण प्रिय कार्टून को नाम सम्झना बाटो पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरु को प्रत्येक जो तिनीहरूले बिल्कुल सबै थाहा र खेल समयमा यो अनुकरण गर्न प्रयास एक Mistress, छ। त्यसैले यो एक मोडेल को विकास मा सबै भन्दा राम्रो पुस्तिका फेला रूपमा, सूट "दानव उच्च" विचार गर्न आफ्नो बच्चा राम्रो छ।
यो सुट छोटो छोटकरीमा, लेग्गीन्स वा स्कर्ट र ब्लाउज वा tunics समावेश हुन सक्छ। पहिलो नजर मा यो यी कुराहरू कठिन बनाउन लाग्न सक्छ, तर यो एउटा misconception छ।
चरण दुई: कपडा विकल्प
यो कपडा चयन मोडेल आधारित चयन गर्नुपर्छ। सुट "दानव उच्च" गर्ल्स रंगीन र हँसिलो हुनुपर्छ। तसर्थ, स्कर्ट फिट payetochnye चमकदार कपडा, tulle र मखमल लागि। छोटकरीमा lurex वा मखमल बुना सी गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लाउज लागि पनि सूचीकृत Tissues लाग्न सक्छ। मुख्य कुरा वेब या त बुना वा राम्रो खण्डका संग थियो छ। यस्तो कपडा काम गर्न सजिलो छ, र बच्चा यसलाई मा सहज हुनेछ। यो एक पोशाक कपडा थिए भने साथै, कट समयमा निरन्तर साना दोष, छैन देखेको गरिनेछ। बाटो एक लागि, द्वारा लोचदार संग स्कर्ट यो organza र ब्रोकेड छ, विशेष गरी यदि फिट र ऊतक यस प्रकारको।
रंग संग गलत हुन, तपाईं गुडिया पोशाकहरू हेर्न र रंग संयोजन प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो आवश्यक छैन, वेशभूषा "दानव उच्च" कुनै पनि मामला मा फैशनेबल हेर्नेछौं किनभने छ। त्यहाँ उपयुक्त चितुवा र सबै रंग मा चिनियाँ रूपांकनों साथै, कालो बैजनी, रातो, गुलाबी, सेतो, नीलो र हरियो रंग संग चित्रहरु हुनेछ।
चरण तीन: कपडा काटन
एक सूट "दानव उच्च" गर्ल्स बनाउन क्रममा, तपाईं, बच्चाको शर्ट र प्यान्ट लिनुपर्छ बाहिर भित्र तिनीहरूलाई बारी। एक तह मा कपडा मा अर्को सबै प्रमुख जोइन्टहरूमा अंकन को आकृति साथ बाहिर कुराहरू र सर्कल फैलाउन गर्नुपर्छ। कि टुक्रा पछि सिउनी भत्ता काट्न छ। आस्तीन, अगाडि र जाँघिया को पछिल्लो आधा लागि, एक अगाडि र पछाडिको समतल Cardigans गरिरहेको को निर्माण को लागि नै लागू हुन्छ।
"सूर्य" र बस गम मा भेला जस्तै स्कर्ट गरिएका राक्षस उच्च वेशभूषा। यो tutu-स्कर्ट, बच्चाको कमर को नियम र यसमा लगाएको tulle को स्ट्रिप्स मा रबर बैंड बनेको छ जो दिखेगा राम्रो पनि छ। त्यहाँ गुलाबी वा रातो संग काले यी heroines लागि यस्तो फेशन संयोजन, रंग संग सानो प्रयोग हुन सक्छ। वा monochromatic स्कर्ट बनाउन।
सूर्य स्कर्ट गर्न उत्पादन +5सेमी को लम्बाइ बराबर एक व्यास संग ऊतक एउटा सर्कल बाहिर कटौती गर्न आवश्यक छ। मा सर्कल को बीचमा कूल्हों को मंडल भन्दा प्वाल अलिकति ठूलो परिधि गर्नु पर्छ। तपाईं पनि सजावट बेल्ट लागि कपडा एक पट्टी आवश्यक हुनेछ।
सजिलो विकल्प स्कर्ट - को गम मा संकलित यो पुछ्ने। ढाँचा एक कपडा पट्टी छ।
चरण चार: tailoring प्रक्रिया
सी सुट तपाईं हात सक्नुहुन्छ बालिका लागि वा टाइपराइटर मा "उच्च दानव"। तपाईं overlock वा नागबेली मा प्रक्रिया विवरण बिना गर्न सक्नुहुन्छ। छाडा ऊतक बरु तपाईं मैनबत्ती भन्दा sear गर्न सक्नुहुन्छ।
सिलाई ब्लाउज को प्रक्रिया काँध seams सुरु। pritachivayut आस्तीन र पछि उपचार घाँटी। थप पक्ष seams बन्द।
जाँघिया अगाडि र पछाडिको भागहरूमा माध्यमिक seams संकलित। यसबाहेक, बन्द धनुष र त्यसको उपचार पक्ष किनारा तथाकथित। लोचदार को सिलना माथि।
एक स्कर्ट संग पनि कम काम। यो कपडा को एक पट्टी को एक सरल मोडेल छ भने, त्यसपछि kuliske गम लागि बनाउने एक छाप यसलाई बन्द र शीर्ष टक। उत्पादन सम्हाल्न सक्दैन को तल।
यो स्कर्ट-सूर्य पनि कुनै ठूलो सम्झौता हो: कपडा पट्टी सर्कल बन्द, बेल्ट गर्न सिलना छन्। पछि आधा जोडेको र cutout को परिधि मा स्कर्ट को शीर्षमा सी। अर्को गम बेल्ट vdet र तयार स्कर्ट हुनेछ।
क्रिसमस वेशभूषा "दानव उच्च" - यो बच्चा संग सह-सिर्जनाको लागि एक महान विकल्प छ। काम केही त्यो हस्तनिर्मित कला रुचि छ विशेष गरी भने, सानो fashionistas निर्देशन गर्न सम्भव छ। तपाईं जब प्रिय पुतली को मनपर्ने तस्बिर अगाडि जन्मेका बच्चा, को प्रशंसा मात्र कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
सजावटी तत्व र सामान
सजावट बिना के नयाँ वर्षको सुट? निस्सन्देह, यो वर्षा को तत्व कुनै पनि मेला पोशाक मा उपस्थित हुनुपर्छ। भिडियो खेल "दानव उच्च", घाँटी मा गाढा tinsel संग सजाया हुन सक्छ आस्तीन तल र पनि स्कर्ट को किनारा मा।
तपाईं पनि थर्मल स्थानान्तरण लेबल, एक मानक फलाम प्रयोग गरेर कपडा हस्तान्तरण जुन जस्तै सजावट को बाटो छ, बिर्सनु हुँदैन। निस्सन्देह, यस्तो FLAMBOYANT पोशाक पुतली सुट लागि चमकदार खोपडी perevodka। यो छाती वा ब्लाउज पछाडि राखिएको गर्न सकिन्छ।
गुडिया को रूप मा एकदम अक्सर मोजा तलवों बिना देख्न सकिन्छ। खैर, यो मान्छे को बहुमत gaiters भनिन्छ लुगा छ। तिनीहरूलाई तपाईं एक स्कर्ट र छोटो लेग्गीन्स संग गर्न सक्छन् रूपमा संयोजन।
छवि थप विवरण
छविको पूरक रूपमा विषालु रंग र उपयुक्त मेकअप संग पुतली बाल विग को टुकडी मा पूर्ण फिट हुनेछ। यस्तो प्रस्ताव गर्ने बालिका माथि दिन असम्भाव्य छ, र सकारात्मक सम्झनाहरु एक जीवनकालमा पछिल्लो हुनेछ।
भिडियो खेल "दानव उच्च", यस लेखमा प्रस्तुत छ फोटो जो प्रेरणा को एक महान स्रोत हुन सक्छ। त्यसैले, कल्पना समावेश, तपाईंले मूल मेला outfit, बच्चा बल को एक स्टार जस्तै महसुस हुनेछ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
ढाँचा Cardigan - कसरी घण्टा एक जोडी को लागि फैशन कुरा सी गर्न
महारत को रहस्य - बुनाई बास्केट
नयाँ वर्षको सुट आफ्नै हातले "बाँदर": ढाँचा, सिफारिसहरू र वर्णन
आवेदन: आफ्नै हातले कागज को ढुकुरले
कसरी आफ्नो आफ्नै हातले चकलेट को bouquets बनाउने?
Ensto, Convectors: तिनीहरूलाई बारेमा सबै भन्दा राम्रो मोडेल र समीक्षा समीक्षा
Keratosis: यो के हो? Keratosis कसरी व्यवहार गर्ने?
नर्सिङ आमा मा कब्जियत: कारण र उपचार विधि
"Gelmifag" - साँचो वा सम्बन्धविच्छेद? "Gelmifag": संरचना, analogues, नकारात्मक प्रतिक्रिया, प्रयोग
स्लालिक साहित्य र संस्कृतिको त्यो उत्सव: इतिहास
"मोरमन" - कुनै उत्सव तालिकाको लागि सलाद
फोटो, समीक्षा: cystography छोराछोरीलाई कसरी